Fulbaana 20, 2021
Faayilii - Konkolaattota Tokkummaa mootummootaa, Tigraay naannoo Aguwaalaa, Caamsaa 8, 2021
Mootummaan Tigraay, bulchiinsi Prezidaant Joo Baayiden fi mootummaan Yunaayitid Isteetis akkasumas manni maree bakka bu’oota biyyattii rakkoo Tigraay keessaaf furmaatni karaa nagaa akka argamu tattaaffii dhaabbataa fi ijaaraa ta’e gochaa jiruuf galateeffatee ibsa baasee jira.
Mootummaan Yunaayitid Isteetis seerri namoomaa kan sadarkaa addunyaa cabuu isaa fi dhiittaa mirga namaa mootummaa Itiyoophiyaa, Eertraa fi humnoota naannoo Amaaraa Tigraay keessa sosso’aniin raawwatamu ilaalchisee tarkaanfii adda addaa inni fudhateef mootummaan Tigraay galata qaba jedha ibsi sun.
Humnoonni Eertraa fi kan Amaaraa Tigraay keessaa ba’anii, wal waraansa naannoo Tigraay keessatti geggeessamaa jiru karaa nagaan furmaata akka argatuuf lola dhaabinsi marii irratti hundaa’e akka tolfamu waamicha dabarsuu isaas ni yaadanna kan jedhu ibsi sun, gama sanaan Yunaayitid Isteetis marii lola dhaabinsaa, michoota sadarkaa addunyaa ka biroo waliin akka mijeesstiu ni affeerra jedha.
Ajaji sadarkaa ol anaa Baayiden mallatteessan, turee dhaga’amu iyyuu, rakkoo naannoo sana keessaa furuu fi deggeruu gama ilaaleen daandii dheeraa deemuu danda’a jedha ibisichi.
Siyaasa Itiyoophiyaa keessaa fi rakkoo gargaarsa namoomaa biyyattiif deebii kennuuf jecha labsii nageenyaa kan hatattamaa Itiyoopiyaa keessatti labsuu isaanii mootummaan Tigraay ni simata jedha.
Prezidaant Bayaiden, rakkoon kun nageenya biyyoolessaa fi imaammata Yunaayitid Isteetisiif yaaddoo kana dura hin baratamin ta’uu adda baasuun isaanii illee sirrii dha jedhee jira.
Ajaji sadarkaa ol aanaa Fulbaana 17, bara 2021 prezidaant Baayideniin mallatteeffame, mirga namoomaa Itiyoophiyaa keessaa kabachiisuuf uggurri, namoota hanga tokko irra kaa’amuu isaa mootummaan Tigraay cimsee ni amana, tarkaanfii daandii sirriitti geessu jedha ibsi mootummaan Tigraay baase kun.
Mootummaan Tigraayis gama isaan qajeelfamoota ijoo kan ajaja sanaa deggeruu akkasumas namoota dhuunfaa yakka hojjetan jedhaman, gareelee fi qaamotii adeemsa lolaaf wal barbaadu kana keessatti uummata Tirgaay fi uummata ka biroo irratti yakka hojjetan jedhaman adda baasuuf murtiitti dhiyeessuuf qophee ta’uu keenya ni ibsina jedhee jira.
Uummata Tigraay tajaajila bu’uuraa, kan akka baankii, ibsaa, telekominikeeshinii, daldalaa, geejjiba daldalaa kan lafoo fi qilleensaa, fi gargaarsa namoomaa dhabee jira.
Dhuma irrattis, weerara gara jabinaan guutame ittisuuf, dhiyeessii gargaarsa namoomaaf haala mijeessuu, humnootii weerartootaa mara gamasii baasuu mirkanessuuf akkasumas lola dhaabinsi marii irratti hundaa’e akka tolfamuuf fixiinsa Tigraay keessatti geggeessameef qorannaan walaba ta’e geggeessamee kanneen yakka raawwatan akka itti gaafataman tattaafii sadarkaa addunyuaa godheef ni galateeffanna jedha ibsi mootummaan Tigraay ajaja sadarkaa ol aanaa prezidaant Joo Baayideniin mallatteeffameef deebii kenne.
Yaadawwan Ilaali (28)